आध्यात्मिक विश्लेशण | मझेरी डट कम
editor — Wed, 02/26/2020 - 18:57
मानिस एउटा सचेत प्राणी हो भन्ने कुरा हाम्रा विविध धर्म शास्त्रले हामीलाई अर्थ्याइरहेका छन् । हामीमा यो पनि साक्षात्कार छ कि मानिस जन्मेपछि मर्छ । जन्मेपछि मानिसले धर्म गर्छ भने स्वर्गमा जान्छ र स्वर्गको आनन्द भोग गर्दछ र पाप कर्मबाट नरकको कष्टदायी जीवन बिताउनु पर्छ । यस्तो स्वर्गलोकको भोग धर्ममा लिन व्यक्तिलाई मात्र सम्भव हुन्छ । यिनै व्याक्ति स्वर्ग भोगपछि निर्मल कुलमा जन्म लिन्छन् ।
दम्वोद्भवले सूर्यदेवको अत्यन्तै ठुलो तप गर्यो । सूर्यदेव प्रसन्न भएर प्रकट भई वरदान मागभन्दा उसले ‘अमरत्व’को वरदान माग्यो । सूर्यदेवले यो सम्भव छैन भने ।
नित्सेले एउटा कुरा लेखेका छन् । लेखेका छन्– पहिलो र अन्तिम इसाई सूलीमा झुण्डियो र मर्यो पहिलो र अन्तिम । क्राइष्टका सम्वन्धमा लेखेका छन्, पहिलो र अन्तिम क्रिश्चियन सूलीमा मर्यो । त, यी पछि आएका इसाईहरूको के गणना छ ? पछिका इसाईहरूको अवस्था कस्तो छ ? यी पछिका इसाई के भए ? पछिका इसाई इसा हुन सकेनन् किनकि इसा हुनका लागि हर तरहबाट स्वतन्त्र व्यक्तित्व चाहिन्छ । अरु त इसाकै दास हुन् । महावीरको पछि हिंँड्ने जैन कहिल्यै महावीर हुन सक्दैनन्, किनकि महावीर हुनका लागि हर तरहले स्वतन्त्र आत्मा चाहिन्छ ।
editor — Sat, 11/03/2018 - 06:15
भीडले हजारौं किसिमका मूर्खता हजारौं वर्षसम्म मानेको छ । र, त्यो भीडमा बुद्धिमान् मान्छेहरू समेत सम्मिलित भएका छन् । र, उनीहरूमा कहिल्यै सोच आएन, किनकि सन्देह उठेन । जसको मनमा सन्देह उठ्दैन उसको मनमा विचार जन्मन सक्दैन । सन्देहभन्दा ठूलो आध्यात्मिक क्षमता अरु कुनै छैन । श्रद्धाभन्दा ठूलो पाप छैन, सन्देहभन्दा ठूलो धर्म छैन । सन्देह उठ्नुपर्छ किनकि सन्देह नउठ्ने हो भने तपाईं समाजबाट, भीडबाट मुक्त हुन सक्नुहुन्न । स्वतन्त्र हुन सक्नुहुन्न ।
editor — Sun, 10/14/2018 - 03:36
ती आत्मा र परमात्मा त धेरै टाढाको कुरा भए । जीवनका असाध्यै सहज अनुभव समेत हाम्रा आफ्ना हुँदैनन्, ती पनि हामी दोहोर्याइरहेका हुन्छौं । यदि म एउटा गुलाफको फूल तपाईंसामु राखेर सोधूँ, के यो सुन्दर छ ? तपाईं भन्नुहुन्छ, सुन्दर छ । तर यसमा पनि थोरै विचार गरौं । यो कुरा तपाईंले स्वीकार गर्नुभएको हो कि स्वयम्ले थाहा पाउनुभएको हो ? किनकि संसारमा भिन्ना–भिन्नै जातिहरू भिन्ना–भिन्नै फूललाई सुन्दर भन्छन् । र, संसारमा भिन्ना–भिन्नै अनुहारहरू भिन्ना–भिन्नै जातमिा सुन्दर ठानिन्छन् ।
editor — Sun, 09/30/2018 - 23:00
मेरो दृष्टिमा, यो शरीरको तलमा जीवनको कुनै उत्तर भेट्न सकिँदैन। र, हामी सबै शरीरको तलमा बाँच्दछौँ। भोक लाग्दछ, प्यास लाग्दछ, लुगा चाहियो, घर चाहियो, त्यसैले बाँचेका छौँ ? एकछिनलाई सोच्नुस्, तपाईंले सबै पाउने हो भने, भोक तृप्त होस्, प्यास तृप्त होस्, तपाईंको वासना पनि तृप्त होस्। तपाईं जे चाहनुहुन्छ, त्यो भेटियोस्, त्यसपछि तपाईं के गर्नुहुन्छ ? मर्नु सिवाय तपाईंसँग अर्को कुनै उपाय बाँकी रहँदैन। तपाईंका सारा इच्छा तृप्त हुने हो भने तपाईं के गर्नुहुन्छ ? त्यसपछि एक क्षण पनि तपाईं बाँच्न सक्नुहुन्छ ? सुत्नुहुन्छ, अनन्त निद्रामा सुत्नुहुन्छ।
editor — Sat, 08/04/2018 - 15:31
जीवनको खोज मृत्युवाटै प्रारम्भ गरिन्छ । जीवनलाई चिन्नु र पाउनु पर्छ । मृत्युको तथ्यबाट खोजलाई प्रारम्भ गर्नेहरू मात्र सफल र समर्थ हुन सक्छन् । हेर्दा उल्टो जस्तो लाग्छ यो । जीवन खोज्न मृत्युवाट आरम्भ गरौं, यो कुरो उल्टो जस्तो लाग्छ । तर कुरो उल्टो छैन । प्रकाश खोज्नेले त्यसलाई अन्धकारबाटै प्रारम्भ गर्नुपर्छ । प्रकाशको खोजको अर्थ के हो भने हामी अन्धकारमा उभिएका छौं र प्रकाश हामीबाट टाढा छ, अन्यथा त्यसको खोज नै किन हुन्थ्यो ? प्रकाशको खोज अन्धकारबाटै हुन्छ र जीवनको खोज मृत्युवाट । हाम्रो खोज जीवनको लागि हो, त्यसको अर्थ हो हामी मृत्युमा उभिएका छौं ।
editor — Sat, 04/29/2017 - 22:30
रजनिस (ओशो) ‘संसार’ हो र तपाईं ‘स्व’ हो । ‘स्व’मा समाधान नभएसम्म संसारमा समाधान हुन्न भनेर योगी डा. विकाशानन्दको कथन सुनेपछि रजनिस को रहेछन् भन्ने खोजी गर्न थालेँ । वास्तवमा हाम्रो जीवनको मूल समस्या बाहिरबाटभन्दा हामीभित्रैबाट पैदा भएको हुन्छ । समस्या जहाँबाट जन्म्यो समाधान पनि त्यहींभित्र रहेको हुन्छ । त्यसैले आफूलाई, आफ्नो स्वभावलाई, आफ्नो क्षमता र प्रवृत्तिलाई सही ढंगले बुझ्न सकियो भने मात्र समस्याबाट पार पाउन सकिने रहेछ । त्यसैले मूल वस्तु नै हामी मनुष्य रहेछौँ । रजनिस त माध्यम मात्र हुनुहुँदो रहेछ । रजनिसले जीवनमा हामीलाई बाटो दिनुहुँदो रहेछ, हिंड्ने काम त हामी जीवनयात्राका यात्रुहरूको नै हो ।
शिवरात्रि पर्व किन मनाउने भनेर जान्नका लागि शिव र रात्रिको अर्थ जान्नु जरुरी हुन्छ । शिवरात्रिको पर्व वास्तवमा कुनै दश बाह्र घण्टाको रात्रिसँग संबन्धित छैन बल्की अज्ञान रात्रिसँग संबन्धित छ । रातिको समय अंधकारले छाएको हुन्छ । सबै सुतेका हुन्छन् । काम विकारबाट वसिभूत भएका हुन्छन् । रातिको समय चोर, डाँकुले पनि लुटपात मचाउँछन् । एक प्रकारले तमोगुणमय वातावरण भएको हुन्छ । तर्सथ यो भावार्थलाई हेरेर द्वापरयुग र कलियुगलाई रातको समय मान्न सकिन्छ ।
तिमी अनि म